Weriyayaal 70 Sanno oo Xabsi ah Mutaysan Doona Madaxweyne DonaldTrump Dartiis | Maankaab.com
Weriyayaal 70 Sanno oo Xabsi ah Mutaysan Doona Madaxweyne DonaldTrump Dartiis
Laba suxufi, ayaa ka mid ah in ka badan 200 qof oo loo haysto dambi ka dhan ah Madaxweyne Donald Trump, gaar ahaan maalintii caleemo saarkiisa, kuwaasoo si aan xad lahayn oo xidh xidhay.
In kastoo waqtigaas ciidammada booliska oo aad u hubaysan darriiqyada xidheen, iskuna hareereeyeen mudaharadayaasha, ayaa haddana waxa la xidh xidhay suxufiyiin iyo sharciyaqaanno. Waxaa ka mid ah weriyayaasha madaxbannaan ee xabsiga loo taxaabay Alexia Wood.
“Xataa maskaxdaydu way garan wayday waxa dhacaaya. Waxa aan sugaayey amarka in dadka la kala eryo ah, dad badan oo aan wax iska cabin ah muujin, ayaa boolisku si dhammaystiran isugu hareereeyeen,” ayuu yidhi 37 jir sawir-qaade ah oo Al Jazeera u warramay.
Waxa January 20, oo ku beegnayd maalintii caleemo saarka Donald Trump la xidh xidhay 230 qof oo ka mid ahaa mudaharaadayaashii ka soo horjeeday doorashada Trump, waxaana ku jiray suxufiyiin duubaayey, warkana ka tebinaayey goobta mudaharaadka.
Inta badan dadkaa mudaharadayaasha ah waxa lagu xukumay qofkibia 10 sannadood oo xabsi ah iyo waliba ganaax lacageed oo dhan $25,000, kuwaasoo uu ka mid ahaa suxufi Wood, balse qaar badan oo ka mid ah mudaharadayaasha waxa lagu eedeeyey dhiirigelin mudaharaad, mudaharaad.